SA can mediate in Zimbabwe only at Zim Govt’s request: Pandor (VIDEO) | Harare Live
Home Politics SA can mediate in Zimbabwe only at Zim Govt’s request: Pandor (VIDEO)
SA can mediate in Zimbabwe only at Zim Govt’s request: Pandor (VIDEO)
SOUTH Africa’s International Relations Minister Naledi Pandor has said the South African government can only mediate in Zimbabwe if the Zimbabwean government, not the opposition, asks for such intervention.
Pandor had been asked by SABC’s Sherwin Bryce-Pease why South Africa was comfortable speaking up about the human rights situations in places like Western Sahara or Palestine but not Zimbabwe when she said it is up to Zimbabwe to ask for help.
Pandor’s statement comed as President Mnangagwa yesterday told a Zanu-PF Central Committee meeting that there is no crisis in Zimbabwe. The President added that he is in constant communication with his South African counterpart Cyril Ramaphosa and they both agree that Zimbabwe is not in a crisis.
Watch the video of her response about South Africa intervening in Zimbabwe below:
Previous articlePresident Mnangagwa says no rift between Zanu-PF and ANC
Next articleProphet steals US$7,400 from his client, buys Honda Fit